Amakhasino eBitcoin - Konke mayelana bitcoin futhi amakhasino aku-intanethi - UK 2021 ✅
Home » Amakhasino eBitcoin
Amakhasino eBitcoin naku-Inthanethi
Yini ama-Bitcoin Casinos
Ungayithola Kanjani i-Bitcoins
Ungayifaka Kanjani i-Akhawunti Yakho Yekhasino
Ungakhipha Kanjani Ukuwina Kwakho?
Yiziphi izinzuzo zokudlala namaBitcoins?
Imidlalo e-Bitcoin Casinos
Kulabo abasha kuma-bitcoins, le yimali ebonakalayo manje isiyatholakala online. Ingenye yezindlela ezivame kakhulu futhi ezithandwayo ze-imali yedatha. Ngokuya ngokuthandwa kwayo, amakhasino amaningi aseyisebenzisa njengenketho kukho kokubili ukufaka nokukhipha imali. Esinye isizathu amakhasino amaningi amukela i-cryptocurrency efana neBitcoin ukuthi ilula futhi iyashesha futhi kulula ukuyisebenzisa kuzo zombili izimali ezifakwa nokudonswa kwemali.
Amakhasino eBitcoin yilawo amakhasino manje ahlinzeka ngama-bitcoins njengenye indlela yabadlali yokuxhasa ama-akhawunti abo. Okwenza i-bitcoin yehluke kakhulu ukuthi asikho isikhungo esinjengebhange elisiphethe. Kuyimali esetshenziswa phakathi kontanga. Indlela adluliswa ngayo kusetshenziswa amakheli akhethelwe ukusetshenziswa kwe-bitcoin. Lawa ngamakheli ayinkimbinkimbi akhiwa izinombolo nezinhlamvu.
Yize kukhona amanye amakhasino amukela ama-bitcoins njengendlela yokukhokha okungamakhasino e-hybrid, kukhona amanye amakhasino abekelwe ngokuphelele ama-deposit kanye nokuhoxa. Amakhasino e-hybrid azokwamukela ama-bitcoins wediphozithi bese eguqula inani libe yimali ejwayelekile. Ukukhishwa kwemali kuzodluliselwa kukheli le-bitcoin elinikeziwe elinikezwa ngumdlali.
Kulabo abanentshisekelo kuma-bitcoins njenge-cryptocurrency, bafuna ukwazi ukuthi bangawathola kanjani ama-bitcoins. Kuzofanele bazithenge, futhi bangasebenzisa izinsizakalo zokushintshanisa ezifana neKraken, BTC-e, noma iBitstamp njengomthombo wabo. Ukuze bathole ama-bitcoins, bangaxhaswa ngemali yokudlulisa imali noma basebenzise izinsiza ezifana ne-SEPA, ACH noma ukudluliswa kwentambo. Ngolunye ucwaningo abathengi abanentshisekelo bangakhetha ezinye izindlela zokukhokhela ama-bitcoins njengamanye amakhadi wesikweletu, noma abanye abahlinzeki be-e-wallet. Kungaba khona nethuba lokusebenzisa izaphulelo zokukhokha.
Inqubo yokufaka ama-bitcoins ekhasino le-bitcoin ayilula. Okokuqala, umdlali ubhalisa nekhasino. Lapho-ke sebekwenzile, bazothola ikheli labo le-bitcoin. Leli ikheli elisetshenziselwa noma ikuphi ukuthengiselana kwe-bitcoin phakathi komdlali nekhasino. Inqubo elandelayo ine-blockchain yama-bitcoins aqinisekisa ukuthengiselana. Imvamisa, akukho ukubambezeleka okuningi ngalokhu. Ngokuvamile, kufanele kuqinisekiswe kungakapheli ihora. Uma le nqubo isenzekile, imali izobonakala kwi-akhawunti yekhasino yomdlali, futhi bakulungele ukujabulela ubumnandi ikhasino ebalindile.
Yikuphi abadlali okungafanele bakhohlwe ngakho noma yikuphi ukuqinisekisa ukuthi bayazi ngamabhonasi ekhasino ahlinzekwayo. Kufanele zitholakalele abagcini be-bitcoin njengoba benjalo nakwabanye abafaka imali. Umvuzo wezikhathi eziningi amabhonasi azonikeza abadlali ithuba lokudlala ngemali yamahhala.
Umfakisimali we-bitcoin uzothola ukuthi ukukhipha ama-winnies abo kube lula njengoba bekunjalo nokufaka. Umdlali kufanele athumele izinhlamvu zemali ekhelini labo lenkonzo yokushintshana eliqokiwe. Izinhlamvu zemali bese zithengiselwa le nsizakalo yokushintshanisa bese zihlela ukuthi izimali zikhishwe kubo. Lokhu kungaba ngesimo sokudluliswa kwebhange noma ezinye izinketho abangazinikeza. Iningi lochwepheshe kuma-bitcoins liphakamisa ukuthi kwenziwe ukulanda isikhwama samahhala se-bitcoin okufanele sivikelwe kahle nge-password eqinile. Abasebenzisi beBitcoin kufanele futhi bazi ukuthi kukhona ukuguquguquka okwenzeka ngamanani we-bitcoin.
Kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa ama-bitcoins ukuxhasa imali nokuhoxa kwi-akhawunti yekhasino, efana:
Inqubo yokufaka imali ayizi mali, futhi kulula kakhulu ukuyenza. Akungabazeki ukuthi futhi kuyindlela ephephe kakhulu futhi evikelekile yokuxhasa i-akhawunti yekhasino. Akujwayelekile ukuthi abadlali abasebenzisa izindlela ezijwayelekile zokufaka imali kumele bakhokhe imali ekuhoxisweni kwabo ngenxa yokucubungula. Ngama-bitcoins, lokhu akuyona inkinga ngoba lezi zimali azikho. Ngakho-ke isimo saso sokuwina kokubili ikhasino nesidlali.
Azikho izikhungo ezisemthethweni ezifana namabhange noma imithethonqubo kahulumeni uma kukhulunywa ngama-bitcoins. Lezi zinhlangano azikwazi ukufinyelela ezikhwameni, njengokukwazi ukubamba imali, okuhlale kuyenzeka ngemali yendabuko. Lokhu kuyinzuzo ebalulekile kulabo abajabulela amakhasino aku-inthanethi lapho kungavumelekile khona ezweni labo ukwenza njalo.
Ukungaziwa ngokugembula ku-inthanethi kungenye inzuzo enkulu. Amakhasino we-Bitcoin ngokuvamile adinga kuphela umdlali ukuthi anikeze ikheli le-imeyili ne-password. Imvamisa, asikho isidingo sokunikeza noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu.
Okuthokozisayo ukuthi ama-Bitcoin Casinos, ikakhulukazi, afana nanoma iyiphi i-casino eku-inthanethi, okusho ukuthi banikela ngazo zonke izinhlobo ezifanayo zemidlalo. Okubandakanya ama-slots nemidlalo yetafula. Mhlawumbe ukhona kumakhasino eBitcoin okuyinkomba yokudlala okulungile. Abadlali bangakuqinisekisa lokhu ngokusebenzisa izinombolo ze-ID yokubheja kanye nolwazi olwengeziwe. Lokhu kuzohluka ngokuya ngendawo ngayinye yekhasino yeBitcoin.